Nambara ny fisian’ny “Voinam-pirenena”: tafakatra 26 ireo namoy ny ainy, 15 tsy hita popoka, 92 983 traboina | NewsMada
Araka ny fanapahan-kevitra noraisina tao anatin’ny Fivorian’ny filankevitry ny governemanta manokana, omaly, nambara tamin’ny alalan’ny didim-panjakana ny fisian’ny “Voinam-pirenena”. Noho ny voina sy ny takaitra taorian’ny fandalovan’ny andro ratsy teto amin’ny firenena izany. Fantatra fa tafakatra 26 ireo namoy ny ainy, 15 mbola tsy hita popoka, ary mahatratra 92 983 ireo traboina tsy manan-kialofana.
Tafakatra 26 ny namoy ny ainy, 15 ireo mbola tsy hita popoka ary 92 983 ireo traboina sy tsy manan-kialofana amin’izao fotoana izao, araka ny tatitra manokana navoakan’ny BNGRC omaly hariva tamin’ny 6 ora sy sasany. Manoloana izany, nisy ny fivoriana maika nataon’ny Filankevi-pirenena momba ny fitantanana ny tandindon-doza sy ny loza, omaly maraina teny amin’ny lapan’i Mahazoarivo. Tao anatin’ny fivoriana no nanambara ny praiminisitra, filohan’ny filankevi-pirenena, ny fisian’ny voinam-pirenena noho ny halehiben’ny fahavoazana nateraky ny natiora. Namoaka didim-panjakana ny governemanta hanamafisana izany fanambarana voinam-pirenena izany. Nisy, araka izany, ny filankevitra manokana ny governemanta androany zoma antoandro nandraisana izay didim-panjakana izay. Manao antso amin’ny vondron’olona sy ny fikambanana rehetra eto an-toerana sy avy any ivelany, noho izany, ny governemanta malagasy hifanome tanana amin’ny fitondrana ny vonjy aina maika sy hiatrehana ny fanarenana tsy maintsy atao.
Zaraina haingana ny fanampiana
Ankoatra izany, nanomboka ny alakamisy lasa teo, nisy sidina natao tamin’ireo faritra traboina nahafahana nahafantatra ny filana maika toy ny fialofana, ny sakafo, ny kojakojam-pianarana, ny fitaovana fanadiovana rano fisotro, ny fanafody… ary hanamafisana ny fitarihana sy ny fandrindrana nasionaly iandraiketan’ny BNGRC amin’izao voinam-pirenena izao.
Nandritra ny fivoriana notarihin’ny praiminisitra ihany koa no nandrindrana niaraka amin’ny BNGRC ny fanaparitahana haingana ireo fanampiana maika ireo any amin’ny distrika sy faritra traboina. “Ampiasaina avokoa ireo fitaovana rehetra eo am-pelatanana ahafahana manafaingana ny fanaterana ny fanampiana”, hoy ny toromarika.
Mikasika ny lalam-pirenena tapaka (RN 4- RN6- RN44-RN31 sy ny 32..) na atahorana ho tapaka, minisitera maromaro no miara-miisalahy hanafainganana ny asa fanamboarana maika. Nanome toromarika mazava ny praiminisitra hiasa andro aman’alina ireo orinasa hanao ny fanamboarana vonjimaika ka hiverina amin’ny laoniny ny fifamoivoizana amin’ireo lalam-pirenena tena iankinan’ny toekarem-pirenena sy ny fiainan’ny mponina amin’ny ankapobeny. Mila arahi-maso koa ireo fiarabe mivezivezy amin’ireny lalam-pirenena ireny tsy hihoatra ny lanja feran’ny lalàna hisorohana ny fahatapahan-dalana hafa.
Tsy tokony hanararaotra ny mpivarotra
Nilaza koa ny lehiben’ny governemanta fa tokony tsy hanararaotra hampiakatra ny vidin’entana ilaina andavanandro amin’izao vanim-potoana izao ny mpivarotra ary hisy tomponandraikitra hijery akaiky ny zava-misy. Ho hentitra ny minisitera tompon’andraikitra ary handraisana fepetra avy hatrany ireo tratra manao izany.
Taorian’ny fandalovan’ny tangoron-drahona mitondra rotsak’orana matevina tao amin’ny lakandranon’i Mozambika, ny 20 ka hatramin’ny 23 janoary teo, nitondra takaitra mafy noho ny tondra-drano ny faritra fito: i Sofia, Alaotra Mangoro, i Boeny, i Betsiboka, i Melaky, Analamanga ary i Diana. Nitondra ny teny fampiononana ho an’ireo olona namoy havana sy nankahery ireo traboina ny fitondram-panjakana notarihin’ny filoha.